Nepali Rajneeti | यो गाउँमा ९ वर्षदेखि छोरा नै जन्मिएनन्, त्यसपछी गरियो यस्तो अचम्मको घोषणा !
कार्तिक १६, २०७८ मंगलबार ५१ पटक हेरिएको
दक्षिणी पोल्याण्डको चेक रिपब्लिकको सीमासँगै जोडिएको एउटा सानो गाउँमा विगत ९ वर्षदेखि छोरा जन्मिएको छैन ।
गाउँमा बस्ने सबैभन्दा कान्छो बालक १२ वर्ष पुगिसकेका छन् । यसैकारण त्यहाँ छोरा जन्माउने पहिलो जोडीलाई उपहारको घोषणा गरिएको छ ।
मिइज्स्से ओर्दान्स्किका स्थानीयले खोइ किन हो निकै विरलै छोरा जन्माउँछन् ।
त्यहाँका मेयर राजमुन्द फ्रिस्कोले पोल्याण्डका पत्रकारलाई इतिहास पल्टाएर हेर्दा र जन्म दर्ताको अनुगमन गर्दा त्यहाँ पहिले देखि नै पुरुषको जन्म निकै कम हुने गरेको बताए । उनैले छोरा जन्माउने पहिलो जोडीलाई उपहारको घोषणा गरेका हुन् ।
‘हामीले जन्मदर्तालाई समिक्षा गर्दै यसबारे थप अनुसन्धान गर्यौं,’ फ्रिस्कोले भने । ‘पितापूर्खाले जे भने त्यो पुष्टि भयो । छोरीको निरन्तर जन्म भइरहेको छ भने छोराको निकैपाइले साधु सन्त त पक्कै पनि देख्नु भएको होला? उनीहरुले लगाउने लुगा पनि पक्कै याद गर्नु भएको होला?
प्राय: सबै साधुहरुले पहेँलो बस्त्र लगाउने गर्दछन् तर तपाइलाइ थाहा नहुन सक्छ आखिर किन सबै साधु सन्तले पहेलो लुगा लगाँउछन पक्कै यो तपाइको मनमा प्रश्न आयो होला। आखिर किन लगाँउछन त पहेलो लुगा ?
जसका कारण पनि यो पहेँलो लुगा पहिरिने गर्छन। सबै भन्दा महत्वपुर्ण कारण त यो कि पहेँलो रंगलाइ आनन्दको कलर भनेर चिनिन्छ। त्यस कारण पनि उनीहरुले अरु रंग हैन यही कलरको बस्त्र लगाउने गर्छन्। एजेन्सी कम । यसको कारणबारे थाहा पाउन निकै गाह्रो छ ।’ यो खबर साभार गरियको हो ।